Sida looga saaro juquraafi ahaan sawirradayada iPhone | Wararka IPhone
Tutorial: Sida looga saaro juquraafi ahaan sawirradayada iPhone-ka
Pablo Ortega | | Wararka IPhone, Casharrada iyo buugaagta
Mid ka mid ah yutiilitiyada kamaradaha qalabkeena macruufka ah waa suurtagalnimada ku dar geolocation sawirradeenna. Nidaamka hawlgalka ee IPhone ayaa awood u leh inuu helo dhammaan sawirrada aan ka qaadno khariidadda, si aan u sahamin karno qabashada aan ka sameynay qaybaha kala duwan ee adduunka. Laakiin waxaa jira isticmaaleyaal door bidaya in aan "dhul laga dhigin", iyo xitaa in ka sii badan kadib fadeexadihii basaasnimada ee ay fulisay Hay'adda Amniga Qaranka Mareykanka.
Casharkaan waxaan ku sharaxeynaa sida looga saaro macluumaadka juqraafiga taas oo si otomaatig ah loogu soo saaro sawirka galkayaga. Sidaas ayaan uga tagi doonin wax tilmaam ah meelaha aan joognay. Waxaa jira laba siyaabood oo looga saari karo geolocation-ka sawirrada: midka hore, si toos ah goobaha taleefanka. Xulashada labaad waxay noo ogolaaneysaa inaan ka tirtirno macluumaadkan sawirada aan horey ugu kaydinay dusha.
1 Xulashada Koowaad: Iyadoo loo marayo Dejinta
2 Xulashada Labaad: Iyadoo loo marayo Codsiga Qeybta Saddexaad
Xulashada Koowaad: Iyadoo loo marayo Dejinta
Waxaan kaliya u baahanahay inaan booqano dejimaha iPhone-ka, iPod Touch ama iPad si aan uga fogaano taas, laga bilaabo xilligaas, noo geolocation telefoonka. Wixii loogu talagalay:
Tag qaybta Qalabka ee qalabkaaga macruufka ah oo u gudub xulashada Adeegyada Asturnaanta - Goobta.
Markaad halkaa gaarto, waxa kaliya ee lagaa rabo inaad sameyso ayaa ah in la dejiyo juqraafiga kaameradaada oo laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeya, sawiradaadu mar dambe kama muuqan doonaan khariidada
Xulashada Labaad: Iyadoo loo marayo Codsiga Qeybta Saddexaad
Haddii, dhinaca kale, aad rabto inaad tirtirto macluumaad horeyba ula xiriiray mid ka mid ah sawiradaada, markaa waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho codsiyada sida Koredoko ka socota App Store. Qalabkani gabi ahaanba waa bilaash wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad wax ka beddesho macluumaadka la xidhiidha sawiradaada oo aad dib ugu soo celiso liiska.
Ka soo degso barnaamijka App Store.
Fur oo u oggolow abka si aad uhesho duubista sawiradaada. Waxay ku tuseysaa maktabadda sawirka hoose oo ka muuqda dhinaca bidix ee shaashadda.
Meel ku ogow sawirka aad rabto inaad wax ka beddesho, dhagsii oo xulo ikhtiyaarka "Badbaadinta Metadata la'aan" ee "Faahfaahinta".
Waxaad horeyba uheysan doontaa sawirkaaga adigoon wax urur joqoraafi ah lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Tutorial: Sida looga saaro juquraafi ahaan sawirradayada iPhone-ka
Waan ku lumay casharradu, way dhib badan tahay, ma garanayo sida loo tago Asturnaanta aaladda macruufka ka dibna aan u raaco adeegyada goobta: /
Mar alla markii aad ka saarto cunsuriyadda sawirrada, waxay dhaawaceysaa codsiyada kale, waxaan rajeynayaa inaan qabo su'aashaas oo ay aniga iiga jawaabi karaan.
Tilmaamaha qeexan ee Xarunta Ogeysiinta
Hagaaji waxqabadka batterigaaga ee iOS 7.1